चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज: गैँडाको मृत्यु बढ्नुको कारण यस्तो रहेछ ? - Saptakoshionline
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज: गैँडाको मृत्यु बढ्नुको कारण यस्तो रहेछ ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ १२, २०७६ समय: ९:२५:०६
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का ११ महिनामा चितवन निकुञ्जमा ४० वटा गैँडाको मृत्यु भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा त्यो सङ्ख्या २६ थियो।
चितवन निकुञ्जमा विगत तीन वर्षयता चोरी सिकारको क्रममा कुनै गैँडा नमरेको निकुञ्जका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो बेला गैँडाको मृत्यु हुने क्रम किन बढ्यो भनेर संरक्षणविद् तथा प्रकृतिप्रेमीहरू चिन्तित भएका हुन्।
प्रश्न उठेका छन्: के ती सबै गैँडा कालगतिले नै मरेका हुन्? यदि होइन भने यति धेरै सङ्ख्यामा गैँडाहरू के कारणले मरिरहेका छन्?
“बाढीले अन्य वन्यजन्तुहरू पनि बगायो होला, तर हामीले नेपालबाट बग्दैबग्दै गण्डक बाँधपारिपट्टि भारतीय भूभाग पुगेका गैँडालाई निकै दु:ख गरेर फिर्ता ल्यायौँ,” चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) ‍वेदकुमार ढकालले बीबीसीसँग भने।
ढकाल र अन्य संरक्षणकर्मीको डर यस्तो छ – २०७४ सालको बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला केही गैँडा मरेका पनि हुन सक्छन्। तर त्यसको प्रमाण तत्कालै भेटिन्न।
उनी भन्छन्, “बाढीले बगाएर नवलपरासीको त्रिवेणीभन्दा तल पुगेर गैँडा मरेको रहेछ भन्ने त थाहा नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ शव वा कङ्काल निकै ढिलो मात्रै भेटिन्छ। कहिले त भेट्दै नभेटिन पनि सक्छ।”
ढकाल भन्छन्, “एकातिर माइकेन्या (तीव्र गतिमा फैलिने एक प्रकारको मिचाह झार) र जलकुम्भीजस्ता झारले घाँसेमैदान नासिरहेको छ भने अर्कोतिर पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्।”
ढकाल भन्छन्, “त्यसले गर्दा खासगरी प्रजनन र अन्य समयमा भाले गैँडाहरूबीच घमासान द्वन्द्व हुने गर्छ। त्यस्तो बेला पनि आपसी द्वन्द्व वा भिडन्तका कारण गैँडाको ज्यानै समेत जाने गरेको छ।”
“केही गैँडाको ज्यान त्यसरी आपसमा लडेका कारण पनि गएको छ।”
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएका बेला निकुञ्जको सुरक्षाका लागि खटिएका सैनिकका टोली अन्यत्र खटाइँदा त्यो क्रम फेरि बढ्न पुग्यो। तर द्वन्द्वको सकिएपछि चोरीसिकार पुन: नियन्त्रण हुन पुग्यो। पछिल्ला केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र चोरीसिकार “शून्यमा झरेको” भन्दै संरक्षण अधिकारीहरू गर्व गर्दछन्।
निकुञ्जभित्र विचरण गर्ने गैँडा बेलाबेलामा बाघ र गोहीजस्ता जन्तुको आक्रमणमा परिरहन्छन्। ढकाल भन्छन्, “आक्रमणको जोखिम ठूलाभन्दा गैँडाका बच्चा (केटाकेटी) लाई बढी हुने गर्छ। हालै हामीले बाघले गैँडाको बच्चा खाइदिएको र मगर गोहीले गैँडाको बच्चा खाइदिएको प्रमाण फेला पारेका छौँ।”
ढकाल भन्छन्, “हामीले हालसालै देवी तालमा एउटा कङ्काल फेला पार्‍यौँ। कहिले कुनै घोलमा गैँडा मरेको भेटिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा गैँडा के कारणले मरेको हो थाहा हुँदैन। हामी त्यस्तो बेला मृत्युको कारणलाई अज्ञात मान्छौँ।”
“माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भूक्षय भएर चितवनका नदीको सतहमाथि आइरहेको छ,” वार्डेन ढकाल भन्छन्। “माथिल्लो तटीय क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिका कारण नदीको जल प्रदूषित हुन थालेको छ।”
विश्व वन्यजन्तु कोषका वन्यजन्तुविद् डाक्टर शान्तराज ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने, “गैँडाहरू कुनै रोग वा प्रदूषणका कारणले त मरिरहेका छैनन्? कुनै अदृश्य कारण त छैन। हामीले त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।
ढकाल भन्छन्, “नेपालमा द्वन्द्व चर्किएका बेला वयस्क भएका गैँडाहरू अहिले निकै पाका भइसकेका छन्। तिनीहरू विस्तारै कालगतिले मरिरहेका हुन सक्छन्।”
पाका गैँडाको मृत्यु कसरी हुन्छ? गैँडाहरू प्राय: चितवनका घाँसेमैदान वा पोखरी वा पानीको ‘घोल’मा लामो समयसम्म उग्राएर बसिरहेको देख्न सकिन्छ। उमेर पुगेपछि उनीहरू क्रमश: शिथिल र कमजोर हुँदै मृत्युको मुखमा पुग्छन्।
कुनै गैँडा अग्ला घाँसको झाडीभित्र मृत भेटिन्छन्। वार्डेन ढकाल भन्छन्, “कहिलेकाहीँ त पाका उमेरका गैँडा ‘घोल’मा बसेको बस्यै पनि मरिरहेको हुन सक्छ।”
अध्ययन टोलीमा रहेका विश्व वन्यजन्तु कोषका वन्यजन्तुविद् शान्तराज ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले वासस्थानमा आएका परिवर्तन, गैँडालाई अहाल अभाव, माइकेन्या जस्ता मिचाह झारको विस्तार आदि समस्याका अतिरिक्त कुनै अदृश्य कारणले गैँडा सङ्कटमा पर्न लागिरहेका छन् कि? हामी गैँडाको संरक्षण र बासस्थानसँग सम्बन्धित ती र अन्य विषयको अनुसन्धान गर्दैछौँ।”